ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Wedding Dress ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ….. – 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥'𝐬 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞
Hello… စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ…. Covid-19 ကြောင့် Stay at home နေရတာ အဆင်ပြေကြရဲ့လား… New Normal နဲ့ရော အသားကျကြရဲ့လား…
၂၀၂၀ မှာ မင်္ဂလာပွဲလေးကျင်းပဖို့ စီစဥ်ထားကျတဲ့သတို့သမီးလောင်းလေးတွေ အတွက်ကတော့ ဒီ Pandemic ကာလကြီးကို စိတ်ညစ်နေကြမှာပဲနော်…
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီ Pandemic ကြီး ပြီးသွားတာနဲ့ စိတ်ကူးထဲက မင်္ဂလာပွဲလေး ကျင်းပဖို့အတွက် အခုကတည်းက ကြိုပြီး Wedding Dress လေးတွေ ရွေးထားနိုင်စေဖို့ Body Type အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လို Dress မျိုးကို ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ Tips လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာ Fit ဖြစ်နေပြီး ခါးကနေ စပြီး အောက်ကို ကားသွားတတ်တဲ့ A ပုံစံ Gown လေးတွေကိုတော့ အားလုံးပဲ ရင်းနှီးကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်…
နှစ်တွေဘယ်လောက်ပဲ ကြာသွားပါစေ ရိုးရှင်းပေမဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ ဒီ A-line dress လေးတွေဟာဆိုရင် Timeless Elegance လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီး သတို့သမီးလောင်းလေးတွေ Wedding dress ကို ရွေးချယ်ကြရာမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ ထည့်သွင်းစဥ်းစားတတ်ကြတဲ့အထဲမှာ ပါတတ်တဲ့ Dress type လေး တစ်ခုပါပဲ…
A-line Dress လေးတွေကတော့ များသောအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားတိုင်းနီးပါးနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်… ခါးနေရာကို သွယ်လျစေပြီး ခါးအောက်ပိုင်းကို ဖုံးသွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့် Pear body shape ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေးတွေအတွက်တော့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ… Rectangle body shape ရှိတဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လဲ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာ A-line Dress က အပါအဝင်ပါပဲ…
Square Neckline နဲ့ Queen Anne Neckline လေးတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအများစုနဲ့ လိုက်ဖတ်တာမို့လို့ မိမိနဲ့ လိုက်ဖတ်တဲ့ Neckline လေးကို သေချာရွေးချယ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်…
2. Mermaid/Fishtail Skirt
ခါးနဲ့ တင်ရဲ့ အလှကို ပိုမိုသိသာထင်ရှားစေတဲ့ ဒီ Mermaid Dress လေးတွေကတော့ Dramatic look ကို အပေးနိုင်ဆုံး Wedding dress လေးတွေ အဖြစ်နဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေးတွေ ကြားမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်…
Mermaid Dress လေးတွေဟာ ဆိုရင်ဖြင့် နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လှသလောက် ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ရာမှာလဲ အမျိုးသမီးတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်ညီဖို့ အနည်းငယ် ခက်ခဲသော အမျိုးအစားထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ Hourglass body ပိုင်ရှင် သတို့သမီးလောင်းလေးတွေအတွက်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပိုမိုသိသာထင်ရှားစေပြီး ဒူးနားကနေ အောက်အထိ ဖြာထွက်သွားတဲ့အတွက် လှပကျော့ရှင်းတဲ့အသွင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် အခက်အခဲမရှိဘဲ အလိုက်ဖက်ဆုံး Wedding Dress ဖြစ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ…
ပခုံးကြီးပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သွယ်လျတဲ့ Inverted triangle body shape ပိုင်ရှင်လေးတွေအတွက်လဲ Mermaid Dress ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားလို့ ရပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကွက်တိကျနေပြီး ဒူးနားရောက်မှ ဖြာထွက်သွားတဲ့ပုံစံရှိခြင်းကြောင့် သွားလာလှုပ်ရှားရာမှာ အခက်အခဲရှိမရှိသိနိုင်ဖို့ သေချာလေးစမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်နော်…
Hourglass body shape၊ Inverted triangle body shape တို့နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Sweetheart Neckline လေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ မြင်သူတိုင်းအားကျရမဲ့ သတို့သမီးလေးတွေ ဖြစ်နေမှာ အသေအချာပါပဲ…
3. Trumpet Skirt
Disney ရဲ့ Fairy tale လေးတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ ဒီ Ball Gown လေးတွေကတော့ သတို့သမီးလောင်းလေးတွေရဲ့ ကလေးဘဝအိပ်မက်ထဲကနေ အခုချိန်ထိ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ Dress type တွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ… Dreamy look လေးကို ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သတို့သမီးလောင်းတိုင်းရဲ့ ရွေးချယ်စဥ်းစားမှုကိုခံရတဲ့ ဒီ Ball Gown လေးတွေဟာဆိုရင်ဖြင့် ကံကောင်းစွာနဲ့ Body type ပုံစံအမျိုးအစားတိုင်းနီးပါးနဲ့ အဆင်ပြေသင့်လျောပါတယ်…
Hourglass body ပိုင်ရှင်လေးတွေအတွက်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို သိပ်ပြီးပေါ်လွင်စေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်…
Apple body shape ပိုင်ရှင်သတို့သမီးလေးများသာမက ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးသော Plus size လေးများလည်း Wedding day မှာ Ball Gown လေးများကို ဝတ်ဆင်ပြီး စိတ်ကူးထဲက Disney မင်းသမီးလေးအသွင်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်… ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့ Petite body ပိုင်ရှင် သတို့သမီးလောင်းလေးတွေနဲ့တော့ Ball Gown ဟာ လိုက်ဖက်ဖို့ အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်နော်…
အပေါ်ပိုင်းပြည့်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ V-Neck လေးတွေနဲ့ Sweetheart Neckline လေးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်… Halter Strap လေးတွေဝတ်ဆင်လို့လဲ ရနိုင်တာမို့ Body Positive သတို့သမီးလေးတွေ အဖြစ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Fairy tale လေးတွေ ဖန်တီးသင့်တယ်နော်…
5. Column/Sheath Dress
ခုပြောပြမဲ့ Sheath Dress (သို့မဟုတ်) Column Dress လို့ ခေါ်တဲ့ Wedding dress လေးတွေကလဲ Minimalistic-Modern Chic အသွင်ကို ဆောင်နေတာကြောင့် Sophisticated & Effortless ဖြစ်ချင်တဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေးတွေနဲ့တော့ အံကိုက်ပါပဲ… Sheath Dress နဲ့ Column Dress နှစ်ခုက သဘောတရားချင်း တူပေမဲ့ Sheath Dress တွေက ပိုပြီးပျော့ပျောင်းကာ လှုပ်ရှားရလွယ်ကူစေပြီး Column Dress တွေကတော့ အနည်းငယ်ပိုပြီး တောင့်တင်းတဲ့ ပိတ်စမျိုးကို အသုံးပြုပြီး Rigid Structure နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်…
Hourglass body shape ပိုင်ရှင်သတို့သမီးလောင်းများ Inverted triangle body shape ပိုင်ရှင် သတို့သမီးများ ရွေးချယ်သင့်သော Dress type အမျိုးအစားတစ်ခုလဲ ဖြစ်တယ်… Petite body shape ပိုင်ရှင်များလည်း အရပ်အနိမ့်အမြင့်ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားစရာမလိုပဲ လိုက်ဖက်စွာဝတ်ဆင်နိုင်သကဲ့သို့ Rectangle body shape ပိုင်ရှင်များကလဲ ခါးနေရာကို အလှဆင်ကာ Waistline ဖော်ပြီး ဝတ်နိုင်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ Sheath/Column Dress တွေက ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကို အတိုင်းသားပေါ်စေတဲ့အတွက် Apple shape body များ Triangle နဲ့ Pear body shape ပိုင်ရှင်များကတော့ ရှောင်ဖယ်ပြီး ရွေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်…
Inverted Triangle နဲ့ Rectangle လေးတွေအတွက်တော့ Spaghetti Strap လေးတွေက ပိုလိုက်ဖက်ပြီး Petite girl လေးတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ High neck နဲ့ Jewel Neckline လေးတွေကို ဦးစားပေးရွေးသင့်ပါတယ်နော်…
6. Tea-Length Skirt
အရင်ကတော့ Tea-length Dress လေးတွေကို Engagement party များနဲ့ Bridal showers များမှာသာ အများဆုံးဝတ်ခဲ့ကြပေမဲ့ ခေတ်ဆန်ပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ဟန်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Wedding event ကြီးတွေထိ ခေတ်မှီသော သတို့သမီးလေများက ဝတ်ဆင်လာကြတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်…
Tea-Length Gown လေးတွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ အရပ်ရှည်တဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေးများမှအပ အခြားသော body type မျိုးစုံဝတ်လို့ရခြင်းဖြစ်တာကြောင့် အရှေ့တိုင်းဒေသက သတို့သမီးလောင်းလေးတွေကြားမှာတော့ အလွန်ခေတ်စားနေပါတယ်…
Curvy ဖြစ်တဲ့ Plus size body လေးတွေနဲ့လဲ အထူးသင့်လျောသလို အရပ်သိပ်မမြင့်တဲ့ Triangle body shape ပိုင်ရှင်များနှင့် Inverted triangle body shape ပိုင်ရှင်များလဲ ဝတ်လို့ရပြီး Petite body ပိုင်ရှင်များလဲ သဘောကျကြတဲ့အတွက် ၂၀၂၁ မှာ ပိုပြီး လူကြိုက်များလာဖို့ကတော့ အသေအချာပဲပေါ့…
Queen Anne Neckline လေးတွေနဲ့ Sabrina Neckline လေးတွေသာဆိုရင်တော့ body type မျိုးစုံနဲ့ လိုက်ဖက်နေလို့ Royal princess vibe လေးကို ပေးနိုင်မှာပါနော်… ဒါပေမဲ့ Curvy လေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အလှကို ပိုပြီးပေါ်စေမဲ့ Semi-sweetheart neckline လေးတွေနဲ့သာဖြစ်မယ်ဆို ပိုပြီးလိုက်ဖက်ပါတယ်…
ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်တဲ့ Dress လေးကတော့ ခုနောက်ပိုင်း Girl boss လေးတွေအတွက်ရော အရမ်းကြီး Feminine ဆန်ရတာ သိပ်မကြိုက်တဲ့ သတို့သမီးလေးတွေပါ သဘောကျကြတဲ့ Jumpsuit Wedding Dress လေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်… jumpsuit ပုံစံဖြစ်တာကြောင့် ဘောင်းဘီအရှည်နှင့်သာမက ဘောင်းဘီအတိုပုံစံနှင့်ပါ တွေ့နိုင်ပါတယ်…
အနောက်တိုင်းမှာတော့ ခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ပိုမိုခေတ်စားလာပြီး တရုတ်နဲ့ ကိုရီးယားတို့လို့ အရှေ့တိုင်းက သတို့သမီးလေးတွေလည်း ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လာကြတာကို အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်…
Strong and smart look ကို ပေးတဲ့အတွက် Sporty body Shape ပိုင်ရှင်များနှင့် Inverted triangle body shape ပိုင်ရှင်များအတွက် အထူးသင့်လျှော်သလို Girl power ကို ပြချင်တဲ့ Hourglass body ပိုင်ရှင်လေးများလဲ ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်…
Sporty Type လေးတို့အတွက် Plunging Neckline လေးတွေ Straight Neckline လေးတွေနဲ့အထူးသင့်လျော်ပြီး Coat လေးတွေနဲ့ပါ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်တာမို့ သမားရိုးကျ Wedding Dress တွေကို ငြီးငွေ့နေတဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေးအတွက်တော့ ရွေးချယ်စရာ option တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိသင့်တာပေါ့…
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလဲ အခုလောက်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်လို Wedding Dress Type မျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်လဲဆိုတာကို သိသွားလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်…
အခုလိုမျိုး အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုကြတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်… ဒီ Pandemic ကြီးကိုလဲ အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ…
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး Fashion နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ Article အသစ်တွေကိုလဲ တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ စောင်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်…
Tags: #Styling, arielstyle, BodyShape, Gown, Thi&FashionAlliance, Wedding, WeddingDress
Previous စိတ်ပြေလက်ပျောက် အပန်းဖြေရင်း ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ LIFESTYLE YOUTUBE CHANNEL (4) ခု
Next Miss Aniela; “Surreal Fashion” Photograph of Guo Pei collection